Iziphuzo ezi-5 zasekuseni zesikhumba esicacile - Ukudla
Iziphuzo ezi-5 zasekuseni zesikhumba esicacile
5 Morning Drinks Clear Skin
Iziphuzo zasekuseni zidlala indima ebalulekile ekuguqulweni komzimba nasenqubeni yokuhlanza isisu. Ukuqala usuku ngokuphuza ilitha elilodwa noma amabili amanzi kusiza ukusula yonke imfucumfucu emzimbeni futhi, kuholele ekususweni kwesikhumba. Ngokufanayo, kunezinye iziphuzo zasekuseni eziwusizo ekutholeni isikhumba esicacile nesinempilo kwabesilisa nabesifazane. UDkt Stuti Khare Shukla wabelana ngeziphuzo ezinhlanu ezibalulekile ongaqala ngazo usuku lwakho ngesikhumba esikhanyayo futhi esinempilo.
indlela yokumisa izinwele ziwe ngokushesha ngokwemvelo
Ukuphuza inani elihle lamanzi kunika imiphumela emihle. Umzimba wethu uqukethe amanzi angamaphesenti angama-75 ngendlela yoketshezi, kanti amanzi anemisebenzi eminingi egcina isikhumba sihlanzekile futhi sinempilo emzimbeni, ngakolunye uhlangothi, senza isikhumba sethu somile futhi silume. Ukusebenzisa isilinganiso samalitha amanzi ayi-4.5 kuye ku-5.5 nsuku zonke kukhulisa umzimba wakho ngamaminerali kanye nezithwali zomoya-mpilo, kukhipha bonke ubuthi kuwo, futhi kuphumele ekugcineni ibhalansi ye-electrolyte yomzimba enezithambisi zesikhumba, ukuvimbela izinduna.
Uju Namanzi Amalamula
ukusetshenziswa kwesoda yokubhaka esikhumbeni
Faka izinkezo ezimbili kuya kwezintathu zoju kanye nesipuni sikalamula emanzini njengoba lokhu kusebenza njenge-electrolyte futhi kukhiqiza ama-antioxidants kanye nezinto zokulwa nokuguga. Kuyasiza ekuhlanzeni ubuthi obuyingozi emzimbeni wakho futhi kuyasiza ekwehliseni isisindo. Ngenkathi uju lunezakhi zokulwa nokuguga ezigcina isikhumba sakho simanzi, ulamula uqukethe uvithamini C osiza ekuvuseleleni okusha kwamaseli nesikhumba.
Izithelo zicebile ngamavithamini nemicronutrients. Izithelo ezinjengezaqathe, ama-beetroots, ihalananda ngisho nemifino enjengamazambane anezinaminerali ezinothile kanye namavithamini asiza ekuvikeleni induna nokukhulisa isikhumba esinempilo. I-carrot ne-beetroot ziqukethe uvithamini A ovimbela izinduna, imibimbi nokufaka imibala, futhi okusiza ukugcina isikhumba esinempilo, ijusi le-Beetroot linikeza ukujikeleza kwegazi okuhle futhi ligcina isikhumba siphilile. Ngisho amasaladi, katamatisi namakhukhamba, nawo angavimbela izinduna uma lawa masaladi efakwa ekudleni komuntu okuvamile.
Uma ungumthandi wetiye, engeza itiye eliluhlaza noma itiye kalamula ekudleni kwakho. Ivimbela izinduna futhi iqukethe uvithamini C kanye nezinye izakhamzimba ezigcina isikhumba siphilile ngokwemvelo futhi sikhanya.
ukuzivocavoca ukuqeda amafutha esiswini
I-Turmeric umuthi wendabuko kanye nowe-Ayurvedic osebenza njenge-agent elwa namagciwane kanye ne-antiviral. Icebile ngama-antioxidants abambezela inqubo yokuguga. Ukwengeza isipuni esisodwa se-turmeric obisini noma emanzini ashisayo njalo ekuseni kunganikeza imiphumela emihle yesikhumba esinempilo.
Funda futhi: Ukudla Neziphuzo Ezilayishwe Ngamavithamini C Eziyi-10 Ezilungele Isikhumba
ukwelashwa izinwele fall home remedy
kanjani ukulawula inkwethu futhi hairfall
amakhambi asekhaya okukhula kwezinwele
ungalawula kanjani inkwethu nokuwa kwezinwele ekhaya
kabusha izinwele ngokwemvelo amakhambi asekhaya